कतार विश्वकपमा सुराक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। कतारले सन् २०२२ मा आयोजना गर्ने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न कतार सरकार तयार भएको छ। नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मदले नेपालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटेर सुरक्षा गार्डका रूपमा धेरै सङ्ख्यामा नेपाली लैजान कतार इच्छुक भएको र यसका लागि छुट्टै सम्झौता गर्न समेत कतार सरकार तयार रहेको बताएका थिए।
राजदूत मोहम्मदले नेपाल र कतारबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध ४० वर्ष पुगेको सो अवसरमा गृहमन्त्री थापालाई कतार भ्रमणका लागि निम्ता समेत गरेका छन्। खाडीमा रोजगार गुमेपछी नेपाल फर्किए चार लाख नेपाली – कुन देश बाट कती फर्किए सुची सहित्
सिंगापुरबाट ५ हजार ५०३, ओमनबाट ५ हजार ३७६ र दक्षिण कोरियाबाट ३ हजार ५६२, चीनबाट ३ हजार ५५८, हङकङ र मकाउबाट ३ हजार १६४ जना छन् । बंगलादेशबाट २ हजार ५९५, बहराइनबाट १ हजार ३५५, अस्ट्रेलियाबाट १ हजार २४४ र माल्दिभ्सबाट १ हजार १८ जना कोभिड–१९ को असहज परिस्थितिका कारण स्वदेश फर्किएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले गत वर्ष खाडी र मलेसियामा को’रोनाका कारण ४ लाख ७ हजार कामदार प्रभावित भएको सार्वजनिक गरेको थियो । भारतसहित खाडी मुलुकमा ३१ लाख श्रमिक कार्यरत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५४ लाख ९६ हजार ४६० पुगेको छ । खाडी र मलेसियामा मात्रै १३ लाख ४८ हजार ८७२ जना कार्यरत रहेको तथ्यांक छ ।
को’रोना भाइर’सको दोस्रो लहरले वैदेशिक रोजगार प्रभावित भएको छ । पछिल्लो समयमा निशे’धाज्ञासहित हवाइ उडान समेत बन्द गरिएका छन् । नेपालमा दोस्रो लहर शुरू हुनुअघि वैदेशिक रोजगार सहज हुन थाले पनि पछिल्लो समयमा प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ७ लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो तर रोजगारी सिर्जना हुने कुनै कार्यक्रम अघि बढाइएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाखलाई सय दिने रोजगारी दिने घोषणा गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । अन्य रोजगारीका सिर्जनाका कुनै पनि पहल थालिएको छैन ।
विभागका अनुसार को’भिड–१९ यता १ लाख श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुनु, वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउनु तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने क्रम बढेसँगै रोजगारीमा असन्तुलन पैदा भएको छ ।
श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान नदिएको बताउँछन् । को’भिडपछि धेरै भारतीय श्रमिक पलायन भएकाले उनीहरूको ठाउँमा विदेशबाट फर्केकालाई अवसर दिन ढिलाइ गर्न नहुने डा. गुरुङको सुझाव छ । ‘विदेशमा जे काम गरेको छ, यहाँ पनि त्यही प्रकृतिको काम दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । को’भिडको दोस्रो लहरले वैदेशिक रोजगार तहसनहस हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट ८ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । यसले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटे पनि पछिल्लो समयमा खुम्चिँदै गएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
टोकियो ओलम्पिकः पुरुष फुटबलको अन्तिम चारमा ब्राजिल, जापान, मेक्सिको र स्पेन
सेप्टेम्बर १९ बाट आइपीएलका बाँकी खेल सुरु हुने
राजीनामा बुझाएका छैनन् प्रशिक्षक अल्मुताइरीले, हतारमा निर्णय नलिन एन्फाको आग्रह
विश्व कीर्तिमानको संघारमा पुगेका रोनाल्डोको कथा : रोनाल्डो गर्भमा हुँदा आमाले गर्भपतन गर्न गरि फाल्न चाहन्थिन् तर यसरि भाग्यले बचेका थिए रोनाल्डो, जसकारण रोनाल्डोले...
युरोकप विजेता इटाली र कोपा अमेरिका विजेता अर्जेन्टिनाबीच मैत्रीपूर्ण खेल हुने